Saga Ishe weRings: ndeapi mabhuku anoigadzira | Zvazvino Zvinyorwa
Saga raIshe weRings rakagadzirwa nemabhuku matatu. Nekudaro, izvi zvaisave pamiromo yemunhu wese kudzamara kugadziridzwa kwefirimu kwakazvimisikidza kubudirira, kunyangwe nyaya yacho yaive yakanyorwa kare kare.
Nhasi anenge munhu wese anoziva Ishe weRings mafirimu, asi kana iwe ukamubvunza nezve iyo saga ishe wemhete Mubhuku, nezve izvo zvinhu zvisingaonekwe mumabhaisikopo, kana iwo asinganzwisisike manyorero avakazvipa, handizive kuti ndikupindurei. Uye, mumabhuku, maive nezvinhu zvakawanda zvaisabuda mufirimu, pamwe nezvimwe zvinhu zvakashanduka uye zvisina kufanana nenyaya yekutanga. Naizvozvo, nhasi tinoda kutaura takanangana newe zvakananga pamusoro pemabhuku, musiki wavo uye kuti ndeapi mamwe manowano ane hukama navo.
1 Ndiani akanyora ishe weRings saga
2 Mangani mabhuku anoumba saga yeRings saga
3 Iri pre-LOTR bhuku
4 Bhuku rinotevera The Lord of the Rings (iri pamberi)
Ndiani akanyora ishe weRings saga
Zvinodiwa nevanyori vazhinji kunzwikwa nezvezvisikwa zvavo, uye kwete nezvavo. Nechikonzero ichi, vamwe vanoshandisa zita rekunyepedzera, kana kungoda havo kuti vabude mumabvunzurudzo kana kusaina mabhuku kuti varambe vasingazivikanwe uye varegedze bhuku racho riitungamirire.
Sei tichikuudza izvi? Zvakanaka, kana iwe ukateerera kuna Ishe weRings, iwe unonyatso ziva kuti ibhuku rakavawo bhaisikopo (uye nhepfenyuro yeterevhizheni). Asi kana iwe ukateerera JRR Tolkien pachinzvimbo, unogona kusabatanidza zita remunyori nemabhuku aakanyora.
JRR Tolkien kana, zita rake chairo, John Ronald Reuel Tolkien, aive munyori akaberekerwa muSouth Africa (munguva yake yaive Bloemfontein), yemidzi yeGerman neyeChirungu. Akagara muEngland mushure mekugara makore ake matatu ekutanga muAfrica. Baba vake vakangoerekana vafa, apo vaiyedza kupedzisa bhizinesi ravo muAfrica kuti vayanane zvakare nemhuri, izvo zvakasiya mukadzi wavo nevana vaviri vavaive vasina mari. Naizvozvo, vakapedzisira vagara nemhuri yamai vavo.
Vakanga vari amai vaitarisira dzidzo yevana, uye Tolkien aive mumwe wevanonyanya kushingaira. Aida bhotani pamwe nekupinda musango raive pedyo nekwavaigara. Asi anga asiri akaipa pakudzidza mitauro futi, achidzidza chiLatin aine makore mana (pazera iro aitoziva kuverenga nekunyora).
Pazera remakore gumi nemana chete, Tolkien anorasikirwa naamai vake uye mupristi, Baba Francis Xavier Morgan, vanomuchengeta pamwe nemukoma wake. Mhuri yavo yaisada kuziva chero chinhu nezvavo nekuti vaive vatendeukira kuchiKaturike. Yaiva nemupristi uyu paakadzidza Spanish nehunyanzvi, kunyanya kupenda.
BA kubva kuExeter College, akawana dhigirii rerukudzo muChirungu. Kunyangwe akarega kudzidza kujoinha maBritish Mauto muWWI. Nekuda kwekurwara, akaendeswa kuEngland kwaaipora. Yaive panguva ino yaakatanga kunyora "Bhuku reNgano Dzakarasika" (nezita iro rinenge risinganzwike kunge rakajairika, asi kana tikakudaidza kuti The Silmarillion zvirokwazvo zvichadaro).
Asi chaizvo bhuku rine mukurumbira raanozivikanwa naro rakanyorwa gare gare, muna 1925, paakadzokera kuOxford semupurofesa paPembroke College. Aive nenguva yekunyora iyo Hobbit uye maviri ekutanga Ishe weRings mabhuku.
Yekutanga yaakaburitsa nemuparidzi yaive The Hobbit, achivimba kuti yaizofadza vana. Dambudziko nderekuti vakuru vakaiverengawo, yaive budiriro zvekuti vakakumbira kuteedzerana.
Izvi hazvina kuburitswa kusvika 1965, ino iri yekutanga edition yeThe Lord of the Rings, uye ichiitwa mamwe akati wandei shanduro kusvika nhasi (pakaiswa magwaro matsva, senge mune yechipiri edition, uko, muchikamu chekutanga (Nharaunda mhete), a Tarira pane zvakachengetwa zveShire).
Mangani mabhuku anoumba saga yeRings saga
Mhinduro yakapusa maererano nemabhuku anoumba saga yeRings saga matatu. Zvisinei, kana tikatarisa zvishoma pane nhoroondo yemabhuku aya, uye kunyanya pamhando dzakasiyana dzakasikwa, tinogona kutaura nezvebhuku rakazara nezvikamu zvitatu zvakasiyana kubva kune imwe; asiwo yezvikamu izvo mabhuku pachawo aive nawo.
Uye ndizvo izvozvo Saga raIshe weRings, sezvawaona, rakanyorwa nemunyori mumabhuku matatu. Asi, rimwe nerimwe remabhuku iwayo rakakamurwa kuva akati wandei.
Iko Kubatana kweRin'i. Ndiro bhuku rekutanga uye rakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: chirevo uye zvikamu zviviri zvakasiyana: Ringi iri munzira uye Ringi inoenda kumaodzanyemba.
Iyo Towers mbiri. Tolkien's yechipiri bhuku pane raIshe weRings saga. Iri bhuku rakakamurwa zvakare kuita zvikamu zviviri, ari The Betrayal of Isengard uye The Ring Goes East idzo dzakasarudzirwa nemunyori.
Kudzoka kwaMambo. Yekupedzisira raIshe waRings mabhuku uye, sezvakaitika kare, zvakare yakakamurwa kuita zvikamu zviviri, Hondo yeRin'i uye Kupera kweTatu Age. Zvisinei, mazita iwayo akabviswa. Uye zvakare, ine epilogue uko Sam anotaurira iyo nyaya kuvana vake.
Iri pre-LOTR bhuku
Kunyangwe saga weShe Rings saga yatove kubudirira mukati mawo, yakafurirwa nebhuku JRR Tolkien akanyora pakutanga. Isu tinotaura nezve The Hobbit.
Kune avo vanoshamisika, iyo Hobbit ibhuku rakazara, risina zvikamu, kunyangwe hazvo iyo firimu inoenderana pachayo inogona kukuita kuti ufunge neimwe nzira. Iyo inotaurira nyaya yaBilbo Baggins, babamunini vaFrodo, uye kuti mune yake yekushanya akawana Gollum. Uye, naye, Ringi iyo yakazopedzisira yaiba uye ichizvichengetera iye.
Tinogona kutaura kuti bhuku iri rinopa tsananguro zhinji dzezvimwe zviitiko munhoroondo. Nekudaro, zvinokurudzirwa kuti uverenge zvisati zvaitika kuti uve nemamiriro ezvinhu ari nani pazvose zvakasikwa nemunyori.
Bhuku rinotevera The Lord of the Rings (iri pamberi)
Chekupedzisira, hatidi kutisiira rimwe remabhuku aIshe weSaga yeRings iwe yaunofanirwa kuziva. Uye ndezvekuti, kunyangwe zvichinzi inofanirwa kuverengerwa mumashure meaya apfuura, muchokwadi izvo zvinotaurwa mumapeji aya zvakaitika kare kare. JRR Tolkien aida kupa yake yega yega nhoroondo yakazara, izere nekare uye ngano. Uye ndizvo zvaakasika.
Iyo Silmarillion, sekureva kwaive nebhuku iri, inobata ngano zhinji, ngano uye nyaya dzevanyori dzakabatana zvakanyanya neiyo yeThe Hobbit uye The Lord of the Rings. Asi kubva panguva yechinyakare, tichireva kune zvataurwa zvakaitwa nevamwe vapikisi maererano nehondo kana nguva dzakapfuura.
Nei ichifanira kuverengerwa mushure meIshe weRings? Zvakanaka, nekuti izere uye inoremedza, zvekuti kana usina base kutanga, zvinorema kuverenga uye zvakanyanya kunetsa kunzwisisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Iyo saga yeRings saga